Ezona ntlango zintle e-Afrika: ukusuka eSahara ukuya eTeneré | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 15/09/2021 14:00 | Ukuhlaziywa ukuba 17/09/2021 08:57 | Afrika, Izikhokelo
Ukuya e ezona ntlango zintle eAfrika Iya kukuthathela idosi enkulu ye-adventure, kodwa kunye nokuzifumana unemihlaba entle. Ayothusi into yokuba ezinye zezo ndawo, nangona zilula, ziphakathi kwezona zihle ehlabathini.
Njengokuba konke oku akwanelanga, iintlango zinohlobo lomlingo womoya. Ukulula kwayo kunye nobukhulu bayo kukunceda ukuba uqaphele ukungafuneki kwezinto eziphathekayo, ziyakunceda ulahle iinkxalabo zehlabathi kwaye uqhagamshele nendalo. Kodwa, ngaphandle kokuqhubela phambili, siza kukubonisa ezinye zeyona ntlango intle e-Afrika.
1 Ezona ntlango zintle eAfrika: ungabona ntoni kuzo?
1.1 Intlango yeSahara
1.2 Intlango yeKalahari
1.3 Intlango endala yaseNamib
1.4 IDanakil, enye yezona ntlango zintle eAfrika
1.5 Intlango yaseTenerife, ulwandiso lweSahara
Ezona ntlango zintle eAfrika: ungabona ntoni kuzo?
Kwilizwekazi ngalinye ehlabathini kukho iintlango ezintle. Kwanele ukuba sikhankanye, njengemizekelo, ye Atacama eMzantsi Melika (apha sikushiya inqaku malunga nale ntlango), leyo ye UGobi eAsia okanye leyo Iindawo zokudlela (Spain) eYurophu. Nditsho, ngokungqongqo, iindawo ezinje IGreenland yintlango engenasanti, ngaphandle kwekhephu nomkhenkce.
Kodwa kuzo zonke iindawo emhlabeni, mhlawumbi elona nani likhulu leentlango lifumaneka kulo Afrika. Ukongeza, ulwandiso lwabo olukhulu kakhulu kangangokuba bahlala kwinxalenye entle yeli lizwekazi. Ngamafutshane, ukukubonisa, eyona nto intle kukuba sele sikuxelele ngezona ntlango zintle eAfrika.
Phantse kwizigidi ezisithoba ezinesiqingatha seekhilomitha, le ntlango sikufutshane nayo yeyona inkulu ehlabathini phakathi kwezo zishushu (eyesithathu emva Arctic kunye Antarctica). Ngapha koko, isukela kwi- ULwandle Olubomvu de Ulwandlekazi lweAtlantic, ahlala uninzi lweNyakatho Afrika. Ngokuchanekileyo emazantsi ifikelela kummandla we Sahel, esebenza njengotshintsho kwi-savannah yaseSudan.
Njengoko unokucinga, kwindawo enkulu kangaka yomhlaba unokuninzi ukubona. Ngesi sizathu, siza kukuxelela kuphela ngeendawo ezinomtsalane eziphakathi kweyona ndawo intle yeSahara. Ngokunjalo, siya kuyenza kuphela abo bakummandla waseMoroccan. Abo bakumazantsi eAlgeria okanye eLibya banokuba yingozi ngenxa yokungazinzi kwezopolitiko kuloo ndawo.
Siza kuqala IMerzouga, idolophu encinci ekumazantsi mpuma eMorocco apho unokubona ukutshona kwelanga ongalibalekiyo. Kodwa siza kuthetha ngaye, ngaphezulu kwako konke, kuba uya kufutshane kakhulu U-Erg Chebbi, yenye yeeseti ezimangalisayo zeendunduma kuyo yonke iSahara. Ezinye zazo zifikelela kwiimitha ezingama-200 ukuphakama kwaye, kunye neetoni zazo zeorenji, zikunika umbono ongaqhelekanga.
Kuya kufuneka ungaphosi ifayile ye intlambo yedraa, apho uya kuyifumana khona intlango njengoko ubusoloko uyicinga. Oko kukuthi, iindawo ezininzi zesanti kwaye, amaxesha ngamaxesha, i-oasis enezinto zesundu.
Nangona kunjalo, ukuba ukhetha elona cala limiweyo le-colossus yase-Afrika, unokundwendwela ngokungenakuphepheka e-Ouarzazate, eyaziwa njenge "umnyango wentlango" kananjalo njenge "Hollywood yeSahara." Eli gama lokugqibela libangelwa kukuba kule ndawo kwenziwe iifilimu ezininzi.
Kwi-Ouarzazate kuya kufuneka ubone umtsalane kasbah nguTairtirt, inqaba ye-adobe eyakhiwe ngenkulungwane ye-XNUMX ukukhusela indlela endala yegolide. Kodwa kuya kufuneka undwendwele imarike yayo esembindini, egcwele indawo; isikwere seAlmouahidine kunye nesouk yobugcisa.
Okokugqibela, malunga neshumi elinesihlanu leemayile ukusuka kwidolophu edlulileyo, unayo enye kasbah ephethe isihloko seNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi. Yiyo UAit ben haddou, inqaba enkulu enodonga yaseBerber ekwimeko entle yolondolozo.
Namibhiya lelinye lamazwe aseAfrika anezona ntlango zininzi. Ngokukodwa, iKalahari ithatha indawo yomphezulu wayo, kodwa ikwanemigca ebanzi ye Botswana y EMzantsi Afrika (apha sikushiya inqaku malunga nelizwe lokugqibela), kuba inendawo ephantse ibe sisigidi esinye seekhilomitha.
Ixesha lokuqala awela umntu wasemzini ngalo ngo-1849. Igama lakhe liya kuvakala liqhelekile kuwe, njengoko lalinjalo UDavid Livingstone, owafumanisa iVictoria Falls. Kwaye, njengomdla, siya kukuxelela ukuba «kgalagadi» kuthetha «unxano olukhulu».
Kule ntlango intle uyabona IPaki yeSizwe yeChobe, ephawuleka bubuninzi beendlovu, nangona ikwanazo neenyathi, iimvubu, iindlulamthi kunye neempala. Nangona kunjalo, ukuze ubone iingonyama kufuneka uye kwi Central Kalahari Game Reserve.
Ikwavelele kule ntlango IKgalagadi Transfrontier Park, kodwa, ngaphezu kwayo yonke, Makgadikgadi Iiflethi zetyuwa, ezizezona zikhulu ehlabathini. Zenziwa xa ichibi elikhulu elinegama elifanayo loma, awathi kwiminyaka engamawaka eyadlulayo ahlala kwindawo enkulu kuneSwitzerland. Abonwabanga kangangokuba oku kube negalelo kulondolozo lwabo. Kunqabile ukuba umntu angenelele kuzo.
Intlango endala yaseNamib
Dune kwiNtlango yaseNamib
Phakathi kwezona ntlango zintle e-Afrika, iNamib ikwavela ngobudala bayo, kuba ithathelwa ingqalelo indala emhlabeni. Ngapha koko, kukholelwa ukuba sele ikho iminyaka engama-65 yezigidi eyadlulayo. Kwaye sesinye sezizathu zokuba kubhengezwe njengeNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi.
Njengoko unokuthelekelela kwigama layo, ikwafumaneka kwi Namibhiya kwaye inommandla omalunga namashumi asibhozo amawaka eekhilomitha. Ukuba uyindwendwela, iisanti zayo ezibomvu ziya kubamba umdla wakho, kodwa kunye namanye amanqaku ayo anomdla.
Ukuqala, kwelinye icala yi ICape Croos, indawo yokuqala abemi baseYurophu bafika ngayo ngo-1486. ​​Okwangoku, likhaya lolona luhlu lukhulu lweebhere zaselwandle kulo lonke elaseAfrika.
Sondela kufutshane neyangaphambili, nawe ubenabantu abadumileyo Unxweme lwamathambo, yenye yezona ndawo zingafikelelekiyo ngomhlaba elizweni. Inikwe igama kwinani leenqanawa ezixineneyo kunye namathambo emnenga kuloo ndawo.
Kodwa mhlawumbi eyona inomtsalane yile Ipaki yeNamib Naukluft, apho ungabona khona iindunduma ukuya kuthi ga kumakhulu amathathu eemitha ukuphakama. Okokugqibela, njengomnqweno wokufuna ukwazi, kwelinye icala lenkqantosi yaseNamib yidolophu yesiporho Ikholmanskop, idolophu enemigodi eyakhiwe ebutsheni benkulungwane yama-XNUMX ngamaJamani ukukhusela abafuna idayimani.
IDanakil, enye yezona ntlango zintle eAfrika
I-volta ye-Erta Ale, entlango yaseDanakil
Ifumaneka kwinxalenye esemazantsi ye- Eritrea nakumntla-ntshona we Ethiopia, Ngokupheleleyo Iphondo laseAfrika, Le ntlango ithathwa njengeyona ndawo iphantsi neyona ishushu emhlabeni, enamaqondo obushushu angaphezulu kwamashumi amahlanu eqondo lobushushu.
Inendawo ephantse ibe ngamakhulu amabini anamashumi amabini amawaka eekhilomitha kwaye imele iintaba-mlilo, iiflethi ezinkulu zetyuwa kunye namachibi awenziwe ludaka. Phakathi kweyokuqala, Dabbahu, nge 1442 yeemitha ukuphakama, kunye U-Erta Ale, zincinci, kodwa zisasebenza.
Nangona kunjalo, eyona nto inomdla ngale ntlango ingenakumiwa kukuba lilizwe lakwa Abantu base-Afar, Iqela lobuhlanga labelusi abangoonothwal 'impahlana abaphawulwa ngeemela zabo ezinkulu ezigobileyo kunye neenwele zabo ezinemingxunya. Bakha amakhaya abo okwexeshana okanye aris ngamasebe kunye namalaphu enza iidolophu ezibizwa Iidonki.
Intlango yaseTenerife, ulwandiso lweSahara
Sishiye isiphelo enye yezona ntlango zintle zaseAfrika, enyanisweni, olwandiso lweSahara kwinxalenye yayo esemazantsi. Kodwa siyiphatha ngokwahlukeneyo ngenxa yokuchacha kwayo. Ngapha koko, igama elithi "teneré" lithetha "intlango" kulwimi lwesiTuareg.
Malunga namakhulu amane amawaka eekhilomitha zesikwere, zolula ukusuka entshona ye Tshad ukuya emantla mpuma ENiger. Kwaye, ngaphambi kokuba siqhubeke nokuxelela ngaye, asinakuxhathisa ukukuxelela enye yezinto azithandayo. Igcinwe umnxeba Umthi weTénéré. Kwi-1973, yadilizwa lilori kwaye, namhlanje, umfanekiso wesinyithi oyikhumbulayo uhlala kwindawo yayo.
Kodwa iTénéré iphakathi kweyona ntlango intle e-Afrika ngenxa yezinye izizathu. Ukuqala, ngenxa yommandla omkhulu wentlabathi oyintlango owenzayo. Kodwa ngenxa yokuba uninzi lwezinto zakudala zihlala. Mhlawumbi iminyaka engamawaka alishumi eyadlulayo imozulu yayo yayihlukile kuba yayihlala abantu.
Ngapha koko Tassili n'Ajjer, ithafa ngaphakathi kwendawo, yenye yezona zinto zibalulekileyo kubugcisa bamatye ehlabathini. Akukho ngaphantsi kweshumi elinesihlanu lamawaka eesampulu zemizobo kunye nokukrolwa kwexesha likaNeolithic eziye zafunyanwa ezimele ubomi namasiko abemi bale ndawo. Zihambelana ikakhulu ne- inkcubeko kiffian.
Kwelinye icala, kwindawo ehambelana neNiger kukho okumangalisayo iintaba zeAre, ubunzima obunemozulu yaseSahelian eneencopho ezifikelela kwiimitha ezili-1800 zokuphakama kwaye ezinokuma okumangalisayo kwejografi.
Phakathi kwezi ntaba kunye nentlango, isixeko sase Agadez, ikomkhulu lenye yeefifdoms zenkcubeko yaseTuareg. Unokuhendeka ukuba ucinge ukuba le dolophu incinci ayinanto inokukunika yona. Akukho nto iqhubekayo kwinyani. Iziko layo eliyimbali libhengeziwe Ilifa lehlabathi, ibhaso awabelana ngalo nentlango yonke yaseTenerife.
Ngapha koko, ngokwembali ibiyindawo yokuhamba yeendlela ezininzi zorhwebo. Nanamhlanje kukuphuma kwalowo ukhokelela Sabha, yenye yeendlela ezingafumanekiyo kwihlabathi apho iindlela zokuhamba zingafumanekiyo kuye wonke umntu.
Ukuqukumbela, sikubonise ezinye zeyona ntlango intle e-Afrika. Kodwa singabakhankanya abanye abanjengoo Lompoul, eSenegal, neendunduma zaso zesanti eziorenji; leyo ye UTaru, eKenya, kufutshane neKilimanjaro, okanye leyo Ogaden, e-Ethiopia. Nangona kunjalo, ayizizo zonke ezifikelelekayo ukuba sityelele zona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Uhambo » Izikhokelo » Ezona ntlango zintle eAfrika